सार्वजनिक घाटा: यो के हो, उदाहरणहरू, यसले हामीलाई कसरी असर गर्छ अर्थव्यवस्था वित्त
एनकर्नी आर्कोया | | संकट
एउटा देशका बारे सबैभन्दा धेरै सुनिने सर्तहरू भनेको सार्वजनिक घाटा हो। यो राम्रो छैन यदि यो धेरै नै छ भने, किनभने यसले स expenses्केत गर्दछ कि खर्च मुलुकमा आय भन्दा बढी हुन्छ, जसको नकरात्मक परिणाम हुन्छ।
तर, सार्वजनिक घाटा के हो? को रूप मा मापन? यसले हामीलाई कसरी असर गर्छ? यदि तपाईंले आफैलाई यो सबै सोध्नु भएको छ भने, अब हामी यस सूचकमा केन्द्रित हुनेछौं जुन जान्न मद्दत गर्दछ कि देशले राम्रो गरिरहेको छ वा यसको अर्थव्यवस्थामा समस्याहरू छन्।
1 सार्वजनिक घाटा के हो
1.1 स्पेनमा सार्वजनिक घाटा
1.2 सार्वजनिक घाटा र सार्वजनिक .ण
2 यो कसरी गणना गरिन्छ
3 यो कसरी गर्ने
4 सार्वजनिक घाटाले हामीलाई कसरी असर गर्छ
सार्वजनिक घाटा के हो
सार्वजनिक घाटा व्याख्या गर्न को लागी सब भन्दा सजिलो तरीका एक उदाहरण हो। कल्पना गर्नुहोस् कि कुनै देशले प्रवेश गर्न भन्दा बढि खर्च गर्न सुरू गर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ १ लाख यूरो प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, तपाइँको खर्च २ लाख हो। त्यो अतिरिक्त खर्चले तपाईको debtsण भएको देखाउँदछ, र तपाईंले पैसा तिर्नु पर्नेहरूलाई भुक्तान गर्नु पर्छ, त्यसकारण moneyणका साथ वा अन्य सूत्रहरूसहित त्यो पैसा उठाउन उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तर यदि खर्च उच्च नै रह्यो भने, यसले कहिल्यै आफ्नो घाटा समाप्त गर्न सक्नेछैन र लामो समय सम्ममा यो देश अझ गरीब हुन्छ र पैसा पाउन गाह्रो हुँदै गइरहेको छ।
यसको विपरित अवधि सार्वजनिक बचत हो, जसको मतलब हो कि आय खर्च भन्दा बढी हो, त्यो हो, तपाईंसँग खर्च गर्न वा लगानी गर्न पैसा छ। सत्य यो हो कि यसको उदाहरणहरू पाउन सजिलो छैन, तर त्यहाँ त्यस्तो देशहरू छन् जुन सार्वजनिक घाटा एकदम कम छ।
स्पेनमा सार्वजनिक घाटा
स्पेनको मामलामा सार्वजनिक घाटा निकै बढी छ। अनुसार २०२० डाटा, १०.2020%% जीडीपी पुगेको थियो, जुन अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दै त्यस वर्ष हामी १ 175 ० देशहरूमध्ये १ 190 स्थानमा थियौं।
यसमा के समावेश छ? ठीक छ, हामी एक समस्याग्रस्त स्थिति मा अन्तिम स्थितिहरु को बीच हो। हामी 35637 123072 .XNUMX मिलियन घाटाबाट १२२XNUMX२ मिलियन घाटामा पुगेका छौं, जुन महामारीको स by्कटले बढेको अंशमा ठूलो बृद्धि भएको छ।
सार्वजनिक घाटा र सार्वजनिक .ण
धेरै सोच्न गलत छन् कि सार्वजनिक घाटा र सार्वजनिक debtण एक समान हो, जब वास्तविकतामा तिनीहरू हुँदैनन्। दुई सर्तहरूको बिच ठूलो भिन्नता यो हो सार्वजनिक घाटा एक प्रवाह चर मानिन्छ, जबकि सार्वजनिक debtण एक शेयर चर हुन्छ।
यसले के स ?्केत गर्छ? खैर, सार्वजनिक घाटा एक निश्चित अवधिमा आय र खर्च बीचको भिन्नता हो; जबकि सार्वजनिक debtण संचित रकम हुने छ कि सार्वजनिक घाटा वित्त गर्नका लागि गरिन्छ। अर्को शब्दहरुमा, यो अरूले owedण लिएका हुन्छन् जसले हामीलाई उधारो दिएका छन् उनीहरूसँग भएको थप खर्चको भुक्तानी पूरा गर्न सक्षम हुन।
यो कसरी गणना गरिन्छ
सार्वजनिक घाटा गणना गर्दा, त्यहाँ छन् तीन धेरै महत्त्वपूर्ण सूचकहरू कि प्रभाव: देशको आम्दानी, यसको लागत, र जीडीपी। ती सबै समान समयको लागि स्थापित हुनुपर्दछ, जुन प्रायः एक वर्ष हुन्छ।
सूत्र निम्न हुनेछ:
सार्वजनिक घाटा = आय - खर्च।
अब, GDP लाई किन ध्यानमा राख्नु पर्छ? किनकि तपाईं तीनको नियम बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि १००% जीडीपी हुनेछ, सार्वजनिक घाटा जीडीपीको x% हुनेछ। उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईसँग १,००,००० GDP छ, र तपाईको सार्वजनिक घाटा १००,००० छ।
तीन नियमको आधारमा सार्वजनिक घाटा जीडीपीको १०% हुनेछ।
एक देशसँग यसको सार्वजनिक घाटा वित्तिय गर्न विधिहरू छन्। ती मध्येका हुन्:
कर उठाउन। तपाईको लक्ष्य तपाईको खर्च भुक्तान गर्न बढी पैसा उठाउनु हो। समस्या यो हो कि यो सीधा देशका बासिन्दाहरूमा पर्दछ, जसले उनीहरूले अधिक पैसा गुमाउँछन् र उनीहरूको जीवनस्तर ग्रस्त हुन्छ भन्ने संकेत गर्दछ। यस कारणले गर्दा धेरैले देश छोड्ने निर्णय गर्छन्।
अधिक पैसा जारी गर्नुहोस्। यो सामान्य छैन किनकि यसले मुद्राको मूल्यह्रास भएको स imp्केत गर्दछ, र यो नकरात्मक हो, तर यो कम विकसित देशहरूमा प्रयोग हुने विधि हो।
सार्वजनिक Issण जारी गर्नुहोस्। यो के हुन्छ सबैभन्दा बढी गरिन्छ। यो बजारमा सरकारी ondsणपत्र र सरकारी बिलहरू राख्नेबारे हो ताकि लगानीकर्ताहरूले उनीहरूलाई किन्न सक्छन् र यसैले उनीहरूले debtsण तिर्न पैसा प्राप्त गर्छन्। समस्या यो हो कि, यदि यो ठूलो र ठूलो हुँदै जान्छ, अन्तमा "impossibleण लिएको" पैसा फिर्ता तिर्न असम्भव छ।
यी विधिहरू मध्ये कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको क्षेत्रहरु को लागी नकारात्मक असर गर्न सक्छ; तसर्थ, यस निर्णयलाई एक धेरै अध्ययन गरिएको ढ be्गले लिनुपर्दछ ताकि धेरै नोक्सान नहोस्।
सार्वजनिक घाटाले हामीलाई कसरी असर गर्छ
सार्वजनिक घाटालाई उदाहरणको लागि अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंसँग मासिक १००० युरो छ। र २००० यूरोको केहि खर्च। यसको मतलब यो छ कि तपाईंको १००० यूरो छ, जो तपाईंसँग छैन, बीमा, खाना, आदि। त्यसोभए, तपाइँ के गर्नुहुन्छ एक साथीलाई, नातेदारलाई, ती १००० यूरो सोध्नुहोस्।
अर्को महिना, उही चीजमा फिर्ता जानुहोस्, र तपाईं अर्को 1000 युरोको लागि त्यो व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्। यसको मतलब तपाईले उसलाई पहिले नै २,००० तिर्नुपर्दछ, तर के हुन्छ यदि ब्याज पनि भए? यो धेरै हुनेछ। यदि यो जारी रह्यो भने, अन्तमा तपाईले उसलाई ठूलो पैसा तिर्नु पर्नेछ जुन तपाईले फिर्ता तिर्न सक्षम हुनुहुने छैन किनकि, यदि तपाईले यस्तै कार्य जारी राख्नुभयो भने तपाईले खर्च घटाउनु हुने छैन, र यदि तपाईले अरु आम्दानी खोज्नु भएन भने तपाईले कहिल्यै payingण तिर्ने समाप्त गर्दैन।
यो के लाग्छ? ठीक छ, त्यहाँ त्यस्तो समय आउँदछ जब ती व्यक्तिले तपाईंलाई अधिक तिर्दैन। तपाईं कसैलाई पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्न, बाँच्नको लागि तपाईंले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, अझ खराबमा, कम्तिमा केही समयको लागि।
राम्रो देशहरूमा त्यस्तै हुन्छ जब उनीहरूको सार्वजनिक घाटा यति बढी हुन्छ; व्यक्तिको जीवनको गुणस्तरमा असर पर्छ र देश अझ बढी bणी हुन्छ, त्यस्तो समयमा आइरहेको हुन्छ जब यो जारी हुन सक्दैन, र त्यो हो उनीहरूले यसलाई उद्धार गर्नुपर्दछ (वा यसलाई मर्न दिनुहोस्)।
यद्यपि त्यहाँ धेरै अन्य कारकहरू छन् र सबै यति कठोर छैन, तपाईंसँग सार्वजनिक घाटा के हो र यो देशको लागि यसको अर्थ के हो भन्ने कुराको पहिलो अनुमान छ। तसर्थ, राज्यको उद्देश्य मध्ये एक यो हुनु सकेसम्म छिटो कम गर्नु छ र छिटो भन्दा छिटो, समस्या र ठूला परिणामहरु लाई टाढा राख्नु जुन कुनै पनि अवस्थामा सकारात्मक नहुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » संकट » सार्वजनिक घाटा